नेपालका पुल किन कमजोर ?
नेपालमा वर्षाको समय आयो कि पुल भत्किएका समाचार आइहाल्छन् । कतिपय पुल त यत्तिकै पनि भत्किएका समाचार आउँछन् । सयौं वर्ष टिक्नुपर्ने पुलहरू बनाउँदा बनाउँदै वा बनेको १/२ वर्षमै भत्कनु यसको निर्माण पक्षको कमजोरी हो । सम्झौताअनुसार पुल नबनाएको भनी कतिपय पुल उद्घाटन नै नगरी राखिएको छ । यसरी गुणस्तरहीन पुल बन्नुको कारण होला ?
पुलहरू निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च भएको हुन्छ । बिग्रे भत्केमा पूरै सडक सञ्जाल नै अवरुद्ध हुन्छ र तुरुन्तै बनाउन पनि सकिँदैन । त्यसैले यसको योजनादेखि निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन गर्नमा समेत विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । पूर्वाधार संरचानाहरूको तोकिएको जीवन अवधिभरि विना कुनै समस्या सञ्चालन हुन्छ भन्न सकिँदैन । संसारभर नै बनेकामध्ये केही पुलहरू बिग्रेको भत्केको समाचार आइरहेकै हुन्छन् । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन तर नेपालमा बढी नै समस्या देखिन्छ । यो निर्माणमा भएको हेलचेक्र्याइँ र गलत डिजाइनका कारण भएको हुन सक्छ ।
पुल बनाउँदा बनाउँदै भत्केका फोटाहरू सामािजक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको पाइन्छ । वर्षाको शुरुआतमै दुई दर्जनजति पुल भत्काएको र अर्बौं क्षति भएको समाचार आएको छ । सडक विभागले क्षतिको पूर्ण विवरण दिइसकेको छैन । मध्य वर्षा भएकाले अझै केही पुलमा क्षति पुग्न सक्ने अनुमान विभागले गरेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? विभागले यसको कारण खोजी गर्नुपर्ने हो ।
पुल निर्माण गर्दा उपयुक्त साइट छनोटको महत्त्व हुन्छ । तर, स्थानीय व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण पुल बनाउन उपयुक्त नहुने ठाउँमा पनि पुल बनाएको पाइन्छ । त्यही कारण बाढीपहिरोले सडक र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको छ । पुल राख्ने ठाउँको वरिपरिको भू–बनोटको सर्वेक्षण पनि राम्ररी नभएको हुन सक्छ । त्योभन्दा पनि निर्माण सामग्री र निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएका कारण पुलहरू भत्किने गरेको पाइन्छ ।
पुलको जग गहिरोसम्म नजाँदा पनि समस्या भएको हुन्छ । पुल बनाएपछि खोलाले सतह गहिरो बनाउँदै लैजान्छ । अझ गिटीबालुका उत्खननले पुलको जगभन्दा नदीको सतह तल पुगेको पनि पाइन्छ । जसो पुलहरू भत्कनुमा खोलाले खन्ने गहिराइको सही आकलन गर्न नसक्नु हो ।
पुलहरू भत्किरहेको पाइन्छ । पुराना पुलहरू बरु बलिया देखिएका छन् । राणाकालीन पुलहरू केही पनि नहुँदा निर्माणाधीन पुलहरू भने गर्ल्यामगुर्लम ढलेको पाइन्छ । पुल भत्कियो भने तुरुन्त बनाउन सकिँदैन । यसरी पुलहरू भत्किँदा नेपालको पूर्वाधार लागत बढिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि असर पारेको छ । त्यसैले पुल भत्कनुका कारणहरू खोजी हुनुपर्छ । सडक विभागले यसको निर्माणमा देखिएका कमजोरी हटाउनुपर्छ । घूस खाएर गलत डिजाइन र निर्माण प्रक्रियाका पुलहरू स्वीकृति दिने, बजेट निकासा दिनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
नेपालमा सडक पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बढी नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तथ्य सबैजसोले स्वीकारेको पाइन्छ । निर्माण कम्पनीहरूले विभिन्न चन्दा दिनुपर्ने, कर्मचारी, इन्जिनीयर आदि सबैलाई पैसा खुवाउन पर्ने भएपछि निर्माण गुणस्तर हुने कुरै आउँदैन । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न हतार गर्ने र त्यसैअनुसार हतारहतारमा काम गर्ने परिपाटीको पुलमात्र होइन सडकहरूको गुणस्तर पनि छैन । त्यही भएर एउटै सडक वर्र्षेनि पीच गर्नेपर्ने, पीच गरेको केही दिनमै खाल्डाखुल्डी पर्नेजस्ता समस्या देखिइरहेका छन् । तर, यसमा कारबाही भने भएको पाइँदैन ।
कालीमाटी, काठमाडौं ।